Liisaska ugu wanaagsan ee ku saabsan beerashada, u jeedso dabiiciga
Beeralayda Dhaqanka ee Iowa (PFI) waxay u shaqeysaa in ay xoojiso beeraleyda iyo beelaha iyada oo loo marayo baadhitaanka iyo wadaagista macluumaadka beeralayda, oo ka dhigan kala duwanaanshaha beeralayda. Xubnahooda waxay leeyihiin nidaamyo dabiici ah iyo kuwo organic ah, waxay isticmaalaan habab kala duwan oo maareyn ah, hawlgalo qiyaasta oo dhan, waxayna ka yimaadaan asal kala duwan. Hase yeeshee, beeralaydaasi waxay isu yimaaddaan, si kastaba ha ahaatee, waxay aaminsan yihiin dabiiciga ah qaabka beeraha, waxayna u heellan yihiin inay dhaqdhaqaaqooda ku sii wataan sii wadista.
Lo'da lo'da ayaa ka dhigan qaybta ugu weyn ee xubnaha xoolaha leh ee Iowa Dhaqanka ee Iowa. Si gacan looga geysto in ay hawshooda ku sii wadi waarta oo waxtar leh, PFI waxay la shaqaysaa iyaga si ay u hirgeliyaan farsamooyin si kor loogu qaado tayada iyo tayada biyaha.
Intii lagu guda jiray bartamihii bishii Nofeembar ee daaqsinka, ayuu Bruce Carney ka warramay maareynta daaqsinta halka xoolaha Angus ay u darsadeen beerta xuduudaha. Iyada oo la adeegsanayo daaqsinka baahsan, Bruce Carney wuxuu awoodaa in uu kordhiyo xilli ciyaareedkiisa xilliga qaboobaha. Bruce ayaa wadaagay qorshihiisa mashaariicda ilaalinta soo socota. Wuxuu qorsheynayaa inuu qodo xayawaanka si uu u soo dejiyo biyo daadi ah oo ka yimaada beertii beeraha dalagga ee ku dul yaal daaqadiisa. Dhaqdhaqaaqa, wuxuu dhali doonaa dhirta miraha iyo lowska oo ugu dambeyntii siin doona hooskii xoolaha. Marka laga soo tago qorshayaashiisa, Bruce wuxuu abuuri doonaa lix dalool oo dalool ah oo dalagyo ah oo isku dhafan oo daadi ah beerkiisa dalagga dalagga beeraha si ay u daaqaan xilliga guga iyo guga.